Paul Kagame oo Mar Kale Loo Doortay Madaxweynaha Rwanda – Radio Daljir
Agoosto 5, 2017 7:40 b 0
Guddiga doorashooyinka dalka Ruwanda ayaa shaaciyay in uu doorashadii ka dhacday dalkaasi uu ku guuleystay Paul Kagame madaxweynaha dalkaasi.
Mr Kagame ayaa heley 98% boqolkiiba in kabadan codadka la tiriyay, waxaana uu markii sedaxaad qabanaya xafiiska madaxweynaha isagoo kaga guuleystay doorashada ilaa 2 musharax oo kale kuwaasi oo kula loolamayaya doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi.
Kumanaan taageerayaashiisa ah ayaa banana baxyo ka sameynayay magaalooyinka dalkaasi oo ay kujirto caasimadda dalkaasi ee Kigali. Madaxweyne Paul Kagame ayaa lagu tilmaamayaa in uu horumar dhinaca dhaqaalaha ah gaarsiyay dalkaasi, wixii ka dambeyeey 1994 markii xasuuq ba’an uu dalkaasi ka dhacay.
Mr Kagame, ayaa talada dalkaasi hayay muddo dhan 17 sano, dhawaana waxaa isbedel lagu sameeyeey dastuurkii dalkaaasi, oo madaxweynuhu fursad u siinaya in xafiiska uu sii hogaamiyo ilaa 2034.